China Wholesale Sportswear Jacquard Fabric And Scrunch Butt Leggings Seamless Women Sexy Yoga Leggings mpanamboatra sy mpamatsy | Wenchang
Ambongadin'akanjo fanatanjahan-tena Jacquard lamba sy Scrunch Butt Leggings seamless vehivavy Sexy Yoga Legging
Mitroka ny hamandoana
ITEMY NO KWC21-4079
Manasa: Ny akanjo dia vita amin'ny fibre fikarakarana fahasalamana marefo miorina amin'ny proteinina. Tsy mety ny manosotra zavatra marokoroko ary manasa amin'ny milina fanasan-damba. Ny akanjo dia tokony asitrika anaty rano mangatsiaka mandritra ny 5-10 minitra. Mampiasà detergent vita amin'ny landy manokana hanamboarana vovoka fanasana lamba manidina ambany na tsy miandany. Manosotra moramora amin'ny savony, (raha manasa lamba kely toy ny landy vita amin'ny landy ianao dia azo ampiasaina tsara kokoa ny shampooing), ary ny akanjo landy miloko azo kosasana miverimberina amin'ny rano madio. masoandro, ary tsy tokony hafanaina amin'ny fanamainana. Amin'ny ankapobeny dia tokony ho maina amin'ny toerana mangatsiaka sy misy rivotra izy io. Satria ny taratra ultraviolet amin'ny masoandro dia manamboatra lamba landy mora foana, manjavona ary taona. Noho izany, rehefa avy manasa akanjo landy dia tsy tsara ny manodinkodina azy hanala ny rano. Tokony hohozongozonina moramora izy io, ary ny sisiny mivadika dia tokony haparitaka amin'ny rivotra. Avelao ho maina mandra-pahatonga azy ho maina 70% alohan'ny fanosehana na hihozongozona.
Fanosehana: Ny fanatanterahana akanjo manohitra ny kentrona dia somary ratsy kokoa noho ny fibre simika, noho izany dia misy ny fitenenana hoe "tsy misy ketrona dia tena landy". Rehefa avy manasa dia miketrona ny akanjo ary mila nohomboana vy mba ho mafy orina sy kanto ary tsara tarehy. Rehefa manosotra dia avelao ho maina mandra-pahavitan'ny 70% ny akanjo, avy eo manondraka rano mitovy, miandrasa 3-5 minitra alohan'ny fanosehana, ny fifehezana ny hafanana dia tokony hofehezina ambanin'ny 150 ° C. Tsy tokony hokasihina mivantana amin'ny volo landy ny vy hialana amin'ny aurora.
Fitehirizana: Tehirizo ny fitafiana. Ho an'ny atin'akanjo manify, lobaka, pataloha, zipo, akanjo mandry sns dia tsy maintsy hosasana sy hosasana vy alohan'ny hitahirizana azy ireo. Ho an'ny akanjo fararano sy ririnina, palitao, Hanfu, ary cheongsam izay manahirana ny manala sy manasa azy ireo dia tokony diovina amin'ny fanadiovana maina mandra-pilazana azy ireo hisorohana ny holatra sy ny samoina. Aorian'ny famolahana dia afaka mandray anjara amin'ny fanamorana sy fanaraha-maso ny bibikely koa izy io. Mandritra izany fotoana izany dia tokony hotazomina sy hasiana tombo-kase araka izay tratra ny boaty sy ny arimoara hitazonana akanjo mba hisorohana ny fahalotoan'ny vovoka.
Ho fanampin'ny famokarana ny yoga lamba, manana akanjo milomano koa izahay, pataloha amoron-dranomasina, akanjo fanatanjahan-tena, akanjo mihazakazaka, akanjo fanaovana ski, lamba lamba eny an-tendrombohitra.
Manaraka: Spandex Jacquard nanjelanjelatra lamba mihosin-kofehy avo lenta ho an'ny lamba yoga
Lamba pataloha yoga
Lamba lamba yoga